အသက်(၂၅)နှစ်ကျော်မှ စတွဲတဲ့စုံတွဲတွေ ပိုတည်မြဲရတဲ့ အချက်(၅)ချက် - For her Myanmar
အသက်(၂၅)နှစ်ကျော်မှ စတွဲတဲ့စုံတွဲတွေ ပိုတည်မြဲရတဲ့ အချက်(၅)ချက်
မသိဘူး (၂၅)နှစ်ကျော်မှ ရည်းစားထားတော့မယ်
အသက်ကဖြင့် (၂၅)နှစ်ကျော်နေပြီ အခုမှ ချစ်မလို့ကြိုက်မလို့ ကြံစည်တုန်းလားဆိုပြီး ဝေဖန်မစောလိုက်ပါနဲ့ဦး။ နုနုနယ်နယ်အရွယ်ရဲ့အချစ်ထက် တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အရွယ်ရဲ့ အချစ်က ပိုတည်မြဲဖို့ရာနှုန်းများပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် ပိုတည်မြဲရလဲဆိုတော့-
အသက်(၂၅)နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတာနဲ့ ငယ်ရွယ်တုန်းကလို ဇွတ်တရွတ်လုပ်တတ်တာလေးတွေ မရှိတော့ဘဲ အကျိုးအကြောင်းကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့စိတ် ပိုများလာတာမို့ ယောင်းတို့အချင်းချင်း နားလည်မှုပိုရှိလာပါတယ်။ နားလည်မှုရှိနေသမျှတော့ ရန်ဖြစ်တာ ၊ အထင်လွဲတာတွေမရှိတော့ဘဲ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အချစ်ရေးဆီ ဦးတည်နိုင်မှာပါ။
Related article>>>အသက် (၂၀) တုန်းက အချစ်ရေးနဲ့ အသက် (၃၀) က အချစ်ရေးနဲ့ ကွာခြားချက် (၅) ချက်
ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိလို့ အပြန်အလှန်ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးတာမျိုး ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စားစရာလေးတွေ သတိတရဝယ်ကျွေးတာမျိုးဆို သဘောကျကြတာပဲလေ။ အလုပ်လုပ်ပြီး ဝင်ငွေရှိနေတဲ့ ယောင်းတို့လို (၂၅)ကျော်အရွယ်တွေမှသာ ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုတွေကို အပြည့်အဝဖန်တီးနိုင်တာမို့ ယောင်းတို့အချစ်ရေးက ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ လက်တွဲမြဲနေမှာပါ။
အသက်(၂၅)ကျော်လာတဲ့အခါ စိတ်ကစားတတ်တဲ့စိတ်က အတော်ကြီးနည်းသွားပါပြီ။ ဘယ်သူကတော့ ကိုယ့်အတွက်ပိုအရေးကြီးဆိုတာကို ဝေဖန်တတ်နေပြီမို့ အချစ်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် တတိယလူကို ယောင်းတို့ဘဝထဲ ဝင်ရောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အသက်(၂၅)ကျော်မှ ချစ်သူရည်းစားထားပြီဆိုရင် (၂)ယောက်စလုံးကတည်ငြိမ်လာပြီဖြစ်သလို စတွဲဖို့ကိုတောင် လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလာပါပြီ။ တစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားဖို့ အဆင်ပြေနိုင်တာမျိုး ၊ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်ပုံမျိုးကို သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လက်တွဲကြတာမို့ လက်ထပ်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်။
Related article>>>Relationship တစ်ခုမှာ မလုပ်သင့်တဲ့အပြုအမူများ
ကလေးဆန်တဲ့အပြုအမူတွေ ကုန်လွန်နေပြီမို့ ဘဝအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေကို တည့်တည့်မတ်မတ် သွားတတ်နေပါပြီ။ ဒီလိုလမ်းမှန်သွားနေတဲ့ လူ(၂)ယောက်လက်တွဲလိုက်ပြီဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းကို အပြန်အလှန်ဖေးမပြီး လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အသက်(၂၅)ကျော်မှစတွဲရင် ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရနိုင်မလဲဆိုတာကို သိမြင်သွားလောက်ပါပြီ။ မင်မင်ပြောတဲ့ အားသာချက်တွေကိုဖတ်ပြီး ၂၅ကျော်မှ ရည်းစားထားချင်သွားပြီမှတ်လား? 😛
DiDi( For Her Myanmar )
မသိဘူး (၂၅)နှဈကြျောမှ ရညျးစားထားတော့မယျ
အသကျကဖွငျ့ (၂၅)နှဈကြျောနပွေီ အခုမှ ခဈြမလို့ကွိုကျမလို့ ကွံစညျတုနျးလားဆိုပွီး ဝဖေနျမစောလိုကျပါနဲ့ဦး။ နုနုနယျနယျအရှယျရဲ့အခဈြထကျ တညျငွိမျရငျ့ကကျြလာတဲ့အရှယျရဲ့ အခဈြက ပိုတညျမွဲဖို့ရာနှုနျးမြားပါတယျ။ ဘယျလိုအကွောငျးတှကွေောငျ့ ပိုတညျမွဲရလဲဆိုတော့
အသကျ(၂၅)နှဈကြျောလာပွီဆိုတာနဲ့ ငယျရှယျတုနျးကလို ဇှတျတရှတျလုပျတတျတာလေးတှေ မရှိတော့ဘဲ အကြိုးအကွောငျးကို ဆငျခွငျသုံးသပျတတျတဲ့စိတျ ပိုမြားလာတာမို့ ယောငျးတို့အခငျြးခငျြး နားလညျမှုပိုရှိလာပါတယျ။ နားလညျမှုရှိနသေမြှတော့ ရနျဖွဈတာ ၊ အထငျလှဲတာတှမေရှိတော့ဘဲ ငွိမျးခမျြးတဲ့အခဈြရေးဆီ ဦးတညျနိုငျမှာပါ။
Related article >>> အသကျ (၂၀) တုနျးက အခဈြရေးနဲ့ အသကျ (၃၀) က အခဈြရေးနဲ့ ကှာခွားခကျြ (၅) ခကျြ
-ကိုယျပိုငျဝငျငှရှေိလို့ အပွနျအလှနျပြျောရှငျမှုတှေ ဖနျတီးပေးနိုငျတယျ
ဘယျသူမဆို ကိုယျကွိုကျတဲ့အရာလေးတှေ လကျဆောငျပေးတာမြိုး ၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့စားစရာလေးတှေ သတိတရဝယျကြှေးတာမြိုးဆို သဘောကကြွတာပဲလေ။ အလုပျလုပျပွီး ဝငျငှရှေိနတေဲ့ ယောငျးတို့လို (၂၅)ကြျောအရှယျတှမှေသာ ဒီလိုပြျောရှငျမှုတှကေို အပွညျ့အဝဖနျတီးနိုငျတာမို့ ယောငျးတို့အခဈြရေးက ပြျောရှငျမှုတှနေဲ့ လကျတှဲမွဲနမှောပါ။
အသကျ(၂၅)ကြျောလာတဲ့အခါ စိတျကစားတတျတဲ့စိတျက အတျောကွီးနညျးသှားပါပွီ။ ဘယျသူကတော့ ကိုယျ့အတှကျပိုအရေးကွီးဆိုတာကို ဝဖေနျတတျနပွေီမို့ အခဈြရေးကိုအနှောငျ့အယှကျဖွဈစမေယျ့ တတိယလူကို ယောငျးတို့ဘဝထဲ ဝငျရောကျခံမှာမဟုတျပါဘူး။ လကျထပျဖွဈတဲ့စုံတှဲတှေ ပိုမြားတယျအသကျ(၂၅)ကြျောမှ ခဈြသူရညျးစားထားပွီဆိုရငျ (၂)ယောကျစလုံးကတညျငွိမျလာပွီဖွဈသလို စတှဲဖို့ကိုတောငျ လေးလေးနကျနကျစဉျးစားလာပါပွီ။ တဈသကျလုံးလကျတှဲသှားဖို့ အဆငျပွနေိုငျတာမြိုး ၊ ကိုယျနဲ့ကိုကျညီမယျ့ပုံမြိုးကို သခြောဆုံးဖွတျပွီးမှ လကျတှဲကွတာမို့ လကျထပျဖွဈကွတာမြားပါတယျ။
Related article >>> Relationship တဈခုမှာ မလုပျသငျ့တဲ့အပွုအမူမြား
ကလေးဆနျတဲ့အပွုအမူတှေ ကုနျလှနျနပွေီမို့ ဘဝအတှကျတိုးတကျရာတိုးတကျကွောငျးတှကေို တညျ့တညျ့မတျမတျ သှားတတျနပေါပွီ။ ဒီလိုလမျးမှနျသှားနတေဲ့ လူ(၂)ယောကျလကျတှဲလိုကျပွီဆိုရငျ ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့လမျးကွောငျးကို အပွနျအလှနျဖေးမပွီး လြှောကျလှမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျတော့ အသကျ(၂၅)ကြျောမှစတှဲရငျ ဘယျလိုအားသာခကျြတှရေနိုငျမလဲဆိုတာကို သိမွငျသှားလောကျပါပွီ။ မငျမငျပွောတဲ့ အားသာခကျြတှကေိုဖတျပွီး ၂၅ကြျောမှ ရညျးစားထားခငျြသှားပွီမှတျလား? 😛
Tags: Couple, Create, Happiness, Marry, over 25, Relationship